Voafitaky ny MySpace | Martech Zone
Voafitaky ny MySpace ianao
Alatsinainy, Septambra 11, 2006 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Hanomboka aho amin'ny filazako fa tsy tiako ny MySpace. Raha ny marina dia tsy zakako ny MySpace. Manana kaonty MySpace aho hahafahako manara-maso ny zanako lahy, iza ireo namany, ary izay soratany sy apetrany. Fantany fa izany no antony, ary tsy maninona izy amin'izany. Omeko fahalalahana betsaka amin'ny Internet izy, ary ho setrin'izany, tsy manitsakitsaka na mampiasa ny fitokisako izy. Ankizy mahafinaritra izy.
Toa tsy mamaly na tsy mitondra entana feno ny zavatra tsindrio rehetra ao amin'ny MySpace. Mahatsiravina izaitsizy ny interface an'ny mpampiasa. Namaky an-tserasera aho fa iray amin'ireo tranonkala ambony indrindra amin'ny Internet. Tsy azoko antoka hoe maninona, mahatsiravina.
Tonga izao ny fahamarinan'ny MySpace…
1. MySpace dia TSY fahombiazan'ny viriosy.
2. MySpace.com dia Spam 2.0.
3. Tsy namorona MySpace i Tom Anderson.
4. Ny CEO an'ny MySpace Chris DeWolfe dia mifandray amin'ny spam taloha.
5. MySpace dia fanafihana mivantana tao amin'ny Friendster.com.
Ka… miainga izany fa ny MySpace dia tranonkala natokana ho omby omby hanaovana doka fotsiny. Ratsy tarehy kely ha? Ny antsipiriany lurid rehetra dia ao amin'ny 'lazao rehetra' avy amin'i Trent Lapinski, mpanao gazety iray izay naneho ny marina momba ny MySpace ao amin'ny Valleywag.
Maloka ve ny feo? Eny, izany koa no eritreretiko. Na ny nastier aza dia ireo tompon'ny MySpace, Newscorp, dia voalaza fa niezaka nanafina ny marina tamin'ny alàlan'ny fanorisorenana sy ny fifanolanana ara-dalàna. Mampalahelo fa fikambanana vaovao iray… olona arovan'ny Lalàm-panorenana sy mitandrina ny 'fahamarinana' no hiditra amin'ny orinasa ratsy. Fitsarana iray hafa indray ho an'ny fikambanana vaovao iray… mety ho fofon'aina goavambe goavambe maty koa.
Arrr! Lahateny iraisam-pirenena toy ny andron'ny piraty dia ho avy